Arazụ Akpọọla Oku Ka A Kwalite Ejirimara Ndị Igbo
Ụkọchukwu Oseburuụwa Arazụ kpọrọ oku a n'ọgbakọ Igbo maka ntute ndị otu Kristi, bụ nke a chịkọbara site n'aka onye nchọpụta na onyeisi 'Communio Sanctorum Ministry', bụ Ụkọchukwu Oseburuụwa na Ọkammụta Bonachristus Umeogu.
Ọgbakọ ahụ bụ nke a malitere site n'ofùfè nrò a chịkọbara n'ụlọ ekpere ahụ dị n'Agụ Awka, ma bụrụkwa nke dọtara ọtụtụ ndị ụkọchukwu, ndị ọrụ ụka, ndị ọrụ gọọmenti, ndị selitere isi na ngalaba mmụta, ndị enyị na ọha mmadụ ndị ọzọ.
N'okwu ya n'ọgbakọ ahụ, Dọkịnta Arazụ kọrọ akụkọ banyere ihe ndị Igbo na-agabiga n'ala Naịjiria kemgbe ahọ kwuru ahọ gara aga, ma sị na ndị Igbo kwesiri ime ngwa ngwa jikọta onwe ha ọnụ, kwalite ma jidesie njirimara na omenala ha ike, ya na ndị otu Kristi, iji wee sokwa n'ihe a na-eme n'ala Naịjiria.
N'okwu nke ya, ode akwụkwọ izugbe steeti Anambra n'oge gara aga, ma bụrụkwa onye ji aha otu ndọrọ ndọrọ PDP wee zọọ ọkwa gọvanọ steeti ahụ n'ahọ gara aga, bụ maazị Oselloka Henry Ọbaze kwuru na ndị Igbo kwesiri iguzo ma mee ime ihe ngwa ngwa banyere ọnọdụ ahụ ha hụtara onwe ha n'ime ya, ma kwaa arịrị na ndị Igbo, ọ kachasị ndị ji ọkwa ọchịchị n'ogoogo dị iche iche emerubeghị ihe otu a tụrụ anya n'aka ha n'ihe gbasaara ọnọdụ ndị Igbo n'ala anyị na ihe ha na-agabiga.
Na mbụ na nkenke okwuchukwu ya, ụkọchukwu Chika Ọkpalaike kwuru na ọgbakọ ahụ bụ nnọọ nke bịara n'oge a tụrụ anya ya, ma too onye chịkọbara ya, bụ onye ọ kọwara dịka nwoke Chineke jiri amamihe na ọgụgụ isi wee chọọ mma, ọ kachasị n'iji ngbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ were agwọ ọrịa, bụ nke na-egosi na njirimara Igbo agaghị efu.
Na ntụnye nke ya, onyeisi na-ahụ maka agụmakwụkwọ kacha elu na mahadum Nnamdị Azikiwe, bụ ọkammụta Ike Ọdụmegwu mere ka a mara na ọ bụ ezie a na-eji asụsụ bekee were akụzi ihe na mahadum dị iche iche, mana iji asụsụ Igbo kụzie ihe na-eme ka ọ ka kwe nghọta, ọ kachasị e were okwu nkà wee kụzie ya. O wee kpọkuzie ndị nkuzi n'ogoogo dị iche ka ha gbaa mbụ nke ha n'ịkwalite asụsụ Igbo na-anwụnyụzị anya ugbu a, iji tutekwa ya ọzụ.
Ndị ọzọ kwuru okwu na mmemme ahụ gụnyere Ọkammụta Ụtọ Ezeajụghị na Ụkọchukwu Obi Ọgụejiọfọ, bụ ndị kwuru na o kwesiri ka ndị nne na nna ọbụla si n'ụlọ kụzibere ụmụ ha asụsụ Igbo na mkpa ọ dị ịrụsi ọrụ ike malite n'oge ha dị obere, maka na ndị Igbo bụ agbụrụ na-arụsi ọrụ ike.